Kaiibso Online Market - Free Android app | AppBrain
Android Apps > Shopping > Kaiibso Online Market
Kaiibso Online waa Dukan online ah aad ka iibsan kartid badeecootinka kala duwan
Jan 1, 2020 Update Version 9.0
Oct 31, 2019 Update Version 4
Oct 5, 2019 New App Version 2 in SHOPPING for Free
Kaiibso online market Waa shirkad ka dhisan soomaaliya taa soo qabata adeega E-commerce qaybihiisa kala duwan, waxay u dhisan tahay qaab u sahalan macaamilka, sidoo kale waxay ka jawaabaysaa baahida qofkasta oo macaamil la ah kaiibso online market.
Kaiibso online market wuxuu qayb ka yahay hormarka ganacsiga ee kajira gayga soomaaliya
Qaabka uu u shaquuyo appka :
Waxa uu u diyaar san yahay qaab ay isku waa faq san yihiin ganacsiyada soomaalida ayadoo si gaar ah loo fiirinaya adeegyada E-commerce ee ka jira gayga soomaalida. Taasoo lagu soo bandhigaayo adeeg walbo oo uu u baahan yahay qof walba oo ku nool gayga soomaaliya.
Waxa uu ka kooban yahay appka
Kaiibso online market shopping waxaa ka mid ah: Electronics, furniture’s ,stationary iyo cosmetics.
Kaiibso online market waxaa ka heli kartaa wax walba oo xariir la leh shopping.
Kaiibso online market waad ka iibsan kartaa shoppin adigoo adeeg sanaya EVC-plus , E-dahab , E-maal ,master card
Kaiibso online market waxaad ka heli kartaa adeeg yada ay bixiyaan maqaayadaha adigoo kaga dal ban kara qaab online ah, sidoo kale waxay kaiibso online market kuu fududayneesaa in laguugu keeno meel kasta oo aad joogto si bilaash ah.
Kaiibso online market waxa ay kuu sahlaysaa dhamaan adeeg yada travel agencies adigoo si fudud uhili kara dhamaan adeeg yada ay bixiyaan diyaaradaha, xiliga ay baxayaan goobta ay aada yaan iyo qiimahooda , ka dibna waxaa si sahlan ku iibsan kartaa ticket qaab online ah .
Waxa uu kuu sahlayaa kaiibso online market inaad si fudud ku heshid malab saafi adigoo ka iibsan kara online ka .
Waxaad ka heli kartaa kaiibso online market sawirada baabuurta ,naqashadaha baabuurta ,qiimaha baabuurta iyo meelaha laga heli karo baabuurta.
Macaamiisha kaiibso online market waxay si fudud ku ogaan karaan qiimaha dhulka ,goobta uu kuyaalo dhulka iyo cabirka uu lee yahay dhulka.
Kaiibso online market waxa ay isku xiraysaa macaamiisha iyo hospitals ka ayada oo u fududayneeso macaamiisha adeeg yada ay bixiyaan hospitals ka.
Sidoo kale waxay si fudud ku iibsan karaan numbers ka dhaqaatiirta ayaka oo u maraayo qaab online ah.
**Ujeedada guud :
•	Inaad arki kartid adeegyada iyo badeecadda ay hayaan ganacsatada ku xiran kaiibso online market.
•	Inaad si toos ah aad u wici kartid farina aad u diri kartid adoo dhex jooktid appka gudiihiis.
•	Inaad wax ka iibsan kartid marwalba
adeeg adigoo appka baabuurta bixiyaan dhulka fudud gayga heli iibsan inaad iyo kaiibso kartaa kartid macaamiisha market online qaab sidoo soomaaliya waxa waxay yada yahay
allah faaiday going how masha waa you
allah faaiday masha waa
going how you